तिथि मेरो पत्रु » तपाईंको अनलाइन सामाजिक प्रोफाइल तपाईंको नाता Wrecking छ?
द्वारा केसी मोर्गन
तपाईं obsessively माटो उत्खनन गर्न को प्रयास मा मीडिया साइटहरु र खोज इन्जिन सामाजिक मा आफ्नो तिथिहरु लागि खोजी गर्ने मात्र व्यक्ति हुनुहुन्न थाहा, सही? तपाईं आफ्नो इन्टरनेट पदचिह्न आफ्नो क्षमता सम्बन्धमा तपाईं यसो के थाह छ?
बस कति रातो झण्डा तपाईं संभवतः आफ्नो मित्रहरुलाई र अनुयायीहरूलाई सूची हुर्काउन सकिन्छ? तपाईं विचार भन्दा शायद बढी. तपाईं बारेमा जानकारी को सबै भन्दा सुलभ टुक्रा को एक, कम से कम यो इन्टरनेट आउँदा, आफ्नो मित्र हो, जो छ. संभावित मिति केही राम्रो बलियो धारणा आफ्नो सूची देख र बनाउन सकिन्छ.
तपाईं चाँडै मित्रहरुलाई को एक सूची हेर्नका भने, जानकारी टुक्रा तुरुन्तै अवशोषित हुनेछ: सूचीमा महिलालाई मानिसहरूको अनुपात. पुरुष मित्रहरुलाई धेरै छ जो महिला क्षमता डेटिङ तर्साउनुको हुन सक्छ. तिनीहरूले यी सबै मान्छे हो, जो आश्चर्य जाँदै हुनुहुन्छ, के सम्बन्ध छ, र संभवतः खतरा महसुस. यही सामाजिक मिडियामा मानिसहरू बाहिर जाँच गर्ने महिलाका लागि जान्छ. तिनीहरूले सूची मा महिला को एक धेरै देख्दा, तिनीहरूले उत्सुक र अधिक सतर्क हुनु जाँदै हुनुहुन्छ.
तपाईं प्रकट जानकारी
सामाजिक मिडिया तपाईं आनन्द व्यक्तित्व संग कनेक्ट संभावित सम्पर्क राख्न र राम्रो तरिका हो, तर यो पनि तातो-बटन विषय भरिएको गर्नुपर्छ. धेरै मानिसहरू उनलाई कुरा राजनीतिक र सामाजिक कारणहरू पालन गर्न सामाजिक मीडिया साइटहरु प्रयोग. केही पनि आफ्नो पाल्तु जनावर गतिविधिलाई टाउट एक साबुनदान रूपमा प्रयोग. बलियो धारणा धेरै क्षमता डेटिङ बन्द-डाल हुन सक्छ, जो तनमनले हरेक मुद्दा सहमत छैन.
यो हरेक एक मुद्दा मा तपाईं संग सहमत जो एक जोडी भेट्टाउन आदर्श छैन, र यो एक खुला मन सधैं राम्रो छ. आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई तिमी एक संभावित जोडीलाई बमबारी गर्दा, तपाईं पनि साधारण भूमि मिल मौका नपाई तपाईं बन्द बदल र उनलाई दूर धक्का हुन सक्छ.
तपाईं बनाउन अनुरोध
तपाईं को दुई एक हप्ता लागि डेटिङ गरिएको छ, र यो राम्रो तरिकाले जा गर्नुपर्छ. तर तपाईं आफ्नो मित्रहरुलाई सूची comb र अनुरोध संग आफ्नो परिवारका सदस्य र चिनेजानेका सबै बमबारी अघि, बन्द र विचार. यो आफ्नो भाइ बहिनी मित्र उपयुक्त छैन, तपाईं स्पष्ट अनुमति नमागी आमाबाबु र उच्च स्कूल बडिहरूले त्यसो गर्न.
आफ्नो जोडीको फिर्ता या पछि आफ्नो सम्झौता बिना यो के, र तपाईं एक Stalker जस्तै देख हावा सक्छ. आफ्नो मनसाय पुरा तरिकाले निर्दोष हुँदासमेत, यो तपाईं आफ्नो मित्रहरुलाई सबै friending छौं अचानक भने संदिग्ध हेर्न जा गर्नुपर्छ. तपाईं डेटिङ गरिरहनुभएको व्यक्ति तपाईं तिनीहरूलाई मा नजर राख्न खोज्नु महसुस हुनेछ, र यो भरोसा विषयहरूमा सबै प्रकारका खडा सक्छ.
तपाईं साझा फोटो
तपाईं सबै जाडो dieted र अब तपाईं कि ब्रान्ड-नयाँ बिकनी मा अचम्मको हेर्न ... तर तपाईं संसार साझेदारी गर्नुपर्छ होइन. तपाईं आफ्नो फोटो मा प्रकट सामान तपाईं व्यक्ति कस्तो प्रकारको बारेमा गलत छाप बन्द दिने हुन सक्छ. छाला को एक धेरै देखाउन, र आफ्नो क्षमता जोडीलाई डाह सक्छ. तिनीहरूले तपाईं आदर गुमाउन सक्छ. तिनीहरू पनि अन्य मानिसहरू आफ्नो फोटो देखाउन सक्छ, वा तिनीहरूलाई पुन प्रकाशित र दुनिया संग साझा, तपाईं छानिएका केही संग तस्वीरहरु साझा मात्र तयार थिए जब.
तपाईं इन्टरनेटमा केहि राखे एक पल्ट, कुनै यो प्राप्त गर्न सक्छन् र सबैलाई यो बारेमा धारणा बनाउन हुनेछ. तपाईं कि बिकनी शट देखाउन पहिले त्यो सम्झना.
तपाईं सामाजिक मीडिया साइटहरु मा आफैलाई प्रस्तुत कसरी मा हेरविचार. तपाईं पनि धेरै प्रकट गर्न चाहँदैनन्. तपाईं ओछ्यान मा पारित छौं जहाँ तपाईंलाई माया गर्छु भनेर तपाईंलाई त्यस नासमझ चित्र तपाईं को लागि महान सम्झनाहरु चिंगारी सक्छ, तर एक संभावित मिति लागि यो एक ठूलो रातो झण्डा हुन सक्छ. तपाईं त्यस्तो व्यवहार बताउन मौका विगतमा राम्रो छ कहिल्यै सक्छ.
अनलाइन आफ्नो व्यक्तित्व देखाउन, तर फिल्टर संस्करण देखाउन. तपाईं साँच्चै जो लागि माया गर्ने एक जोडी भेट्टाउन चाहनुहुन्छ, र तपाईं आफ्नो धेरै पत्रहरु प्रकट गर्न धेरै अवसर हुनेछ. तपाईं इन्टरनेटमा सबै आफ्नो पक्ष देखाउन हतार छैन.